“Samee Wax Walba Oo Macquul Ah” – Cristiano Ronaldo Oo Ku Amray Wakiilkiisa Jorge Mendes Inuu Dhameeyo Heshiiska Riyada Ee Uu Dib Ugu Laabanayo Man United - Laacib.net
“Samee Wax Walba Oo Macquul Ah” – Cristiano Ronaldo Oo Ku Amray Wakiilkiisa Jorge Mendes Inuu Dhameeyo Heshiiska Riyada Ee Uu Dib Ugu Laabanayo Man United
Cristiano Ronaldo ayaa u sheegay wakiilkiisa inuu dhameeyo heshiiska riyada ah ee uu dib ugu laabanayo Manchester United, sida ay qortay saaka jariirada The Sun.
Xiddiga reer Portugal ayaa doonaya in wakiilkiisa Jorge Mendes uu sameeyo wax walba oo macquul ah si heshiiskaas uu u dhaco.
Ronaldo, oo ka tagay Old Trafford kuna biiray Real Madrid sideed sanno ka hor ayaa ka yaabsaday kooxda reer Spain markii ay soo baxday Jimcihii uu doonayo inuu isaga tago Spain.
Weeraryahanka ayaa wajahaya eedeymo ah inuu dowlada Spain ka qiyaameeyay canshuur gaareysa 13 milyan ginni, waxaana shakiga la geliyay mustaqbalkiisa Real Madrid ay keentay in saxiixiisa lagu dagaalamo.
Man United, Chelsea, Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich ayaa dhamaantood ah kooxo doonaya ciyaaryahanka.
PSG ayaa diyaar u ah inay ku dalbato 122 milyan ginni oo ay sii dheer tahay mushahar qaali ah oo uu sannadkii ku qaadanayo 26 milyan ginni si ay uga dhaadhiciyaan inuu u wareego caasimada Faransiiska.
Laakiin sida ay qortay jariirada The Sun Ronaldo ayaa doonaya inuu ku laabto United, waxaana uu ku wargeliyay wakiilkiisa Mendes inuu sameeyo wax walba oo awoodiisa ah sidii uu uga dhabeyn lahaa arintaas.
32 jirkaan ayaa la fahamsan yahay inuu dareensan yahay in howl aan dhamaanin ay ka taalo Old Trafford, mana seegi karo fursad uu ugu soo laabto isagoo geesi ah.
Hal arin oo u baahan in la xaliyo ayaa ah xiriirka adag ee kala dhaxeeya tababaraha Man United Jose Mourinho.
Labada nin ayaa isku dhacay xilli ciyaareedkii ugu danbeysay ee Mourinho uu joogay Bernabeu laakiin waxaa labadooba wakiil u ah Jorge Mendes.
Tababaraha Man United ayaa diyaar u ah inuu isla ilaawo qilaafkaas si uu goolasha Ronaldo iyo shaqsiyadiisa u keeno Old Trafford.
Ronaldo ayaa iska dhegotiray codsigii uga yimid tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ee ahaa inuu dib uga fiirsado go’aankiisa.